China 5 mu 1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w vagadziri uye vatengesi |Wellink
5 mu1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w
PD100w iri kuchaja ichishanda isina kutadza simba.5Gbps high-speed data transmission;4K yakakwirira-tsanangudzo yekubatanidza kune akasiyana siyana ekuratidzira michina;aluminium alloy shell, kupfeka-resistant;OTG basa rekuwedzera, wedzera mukana mutsva wenharembozha;kunze mbeva, keyboard, network kadhi kutamba mitambo.
4K/HDMI, USB 3.0*3, Type-C/F, Type-C PD100w pinda
sirivha, tsvuku, space grey, darkblue, rose gold
5-in-1 USB-C hub & Kuwedzera Kukuru: Iyi multiport type c adapta ine 1 * 30HZ HDMI vhidhiyo inobuda chiteshi inotamisa midhiya mumasekonzi ine 3D maitiro, 1 * 100W USB-C simba rekutumira yekuchaja, 3 * USB 3.0 madoko epamusoro ekufambisa data.Chosure USB C hub ndiyo yako yekufonera yakanakisa sarudzo yekuwedzera yako Macbook skrini.
Ultra-yakaderera Temperature Control & Yakazvimirira Chip: Yakagadzirwa neyakagadzika aluminium alloy zvinhu uye yakavakirwa-mukati yakangwara chip ine yakanakisa kupisa kupisa basa;tembiricha yepamusoro yeiyi USB C docking station ingori 118.4℉pasi pekushanda kwemutoro wakakwana;Imwe chip yakazvimirira inodzora chiteshi chimwe chete, inotsigira basa rekushanda zviteshi zvese pasina kunonoka uye kukanganiswa uye kudzivirira kupfuura-ikozvino, over-voltage, short circuit uye yakakwirira-tembiricha yekuchengeteka.
Thunderbolt 3 kusvika HDMI Dongle: Yepamberi 30Hz HDMI Tekinoroji, girazi kana wedzera skrini kuburikidza ne30HZ HDMI vhidhiyo chiteshi kuti utepfenyure zvakananga 3840 x 2160 vhidhiyo kuHDTV, monitor kana purojekita.Iwe unogona kunakidzwa zvirinani zvakatsetseka, mavara, ruzha, uye ruzivo pane 30HZ port.Uye inotsigira yakaderera pane 4K * 2K@60HZ resolution.
Simba Data Transmission: Zvitatu zve USB 3.0 zvinopindirana zvakazvimiririra zvinodzorwa nepamusoro machipisi, iyi mhando-c splitter inogona kuisa matatu hard disks panguva imwe chete yakagadzikana uye nekukurumidza kutumira data pasina kubviswa.Kumhanyisa kusvika pa5Gbps, inoenderana neUSB 3.0 2.0 senge USB deive, flash drive, wi-fi adapta, mbeva, keyboard uye zvimwe zvinomhanya zvakaderera.
Inotakurika & Warranty: Bata uye tamba, chete 2.33oz, yakatsetseka compact ine saizi yehomwe iri nyore kuseta mulaptop yako sleeve, bhegi kana homwe.Kambani yedu inopa Zvisina Chimiro mazuva makumi matatu ekudzoserwa garandi & 18 Mwedzi waranti & Hupenyu hwenguva refu chigadzirwa rutsigiro & Hushamwari Mutengi Sevhisi.Kana uine mibvunzo, tapota usazeza kutibata nesu chero nguva zvakasununguka.
Ndeipi tembiricha yehubhu kana chiteshi chese chiri kushanda?Kupisa here?
Mhinduro: Zvingangoita 100℉mushure memaawa mana ekushanda, kupisa zvishoma asi kunogona kugamuchirwa
ndinogona kushandisa usb3.0 chiteshi kuchaja samsung s8?
Mhinduro: hongu, asi kumhanya kwekuchaja kwakaderera.
Iyo bandwidth yakanaka kuishandisa kune oculus rift, inoda 3 usb 3s uye hdmi?
Mhinduro:Ndine hurombo, iyo hub haisi kushandiswa kune oculus rift.
Kusiyana nerondedzero yewebhusaiti, mumwe muongorori akanyora kuti hubhu iyi haitsigire 4k 60hz.pane mumwe angasimbisa here?
Mhinduro:Zvinoenderana.Iwe unofanirwa kutarisa maitiro ekombuta yako.Mac yangu yairatidza 60Hz, asi dell laptop yangu yairatidza 30Hz, saka komputa inofanirwa kutsigira usbc 60Hz kuratidza.
Pakazosvika Ndira 14, 2021
ndinogona kushandisa pd port kuendesa adate, kana kungochaja?
Mhinduro: Iyo pd port inoshandisa chete kubhadharisa
Pane here akaisa mahard drive maviri?inokurumidza here?
Iyi hub inoshanda nefoni here?
Mhinduro:Ehe, kana foni yako iri mhando c port
Izvi zvinoshanda here pasina magetsi ekunze?
Mhinduro:Ehe haidi ekunze magetsi.
Ichashanda nesamsung s9 yekuunza mifananidzo kunze kwenyika?
Mhinduro:Ehe, kugadzirisa pazasi 4K kunotsigirwa
izvi zvinogona kushandiswa ne thunderbolt 2 port?
Mhinduro: kwete, Chiteshi chakasiyana
Zvakapfuura: Type-C 15w isina waya HUB (12 mu1)
Zvinotevera: 5 mu1 Rudzi-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, RJ45